အိုတရုတူးမြောင်း ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
ပင်လယ်ကမ်းနားတစ်လျှောက်ကို မြေဖို့ ကာ ၁၉၂၃ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးအောင်တည်ဆောက်ခဲ့သော အရှည် ၁၁၄၀ မီတာရှိသော တူးမြောင်း။ တစ်ဖြောင့်တည်းမဟုတ်ဘဲ ပင်လယ်ကွေ့ က ကွေ့ ပတ်နေခြင်းက ထူခြားချက်။ လျှောက်လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ဂတ်စ်မီးတိုင် ၆၃တိုင်က စီတန်းရှိနေပြီး ညနေခင်းနေဝင်ချိန်တွင် မီးထွန်းထားပါက အနုပညာဆန်သောမျက်နှာများကို မြင်ရသည်။ ကနူးလှေဖြင့် တူးမြောင်းကို လှည်ပတ်သွားလာနိုင်ပြီး ကျောက်တုံးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဂိုထောင်များရှိသောလမ်းများကိုလည်း ခံစားနိုင်ပါသည်။
Hokkaidō Otaru-shi Minatochō
ညနေခင်းနေဝင်ချိန် (ရာသီဥတုကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲမှုရှိသည်) ~၂၂း၃၀ မှ ဂတ်စ်မီးတိုင်များ ထွန်းလင်းသည်။
ဇန်နဝါရီ မှ မေလ ၊ စက်တင်ဘာ မှ ဒီဇင်ဘာလ နေဝင်ချိန် မှ ၂၄း၀၀ အထိ
ဇွန်လ မှ သြဂုတ်လ ၁၈း၀၀ မှ ၂၄း၀၀အထိ
နေ့ လည်ပိုင်းရှု့ ခင်းကလည်း လှသကဲ့သို့ညနေခင်းနေဝင်ချိန်မှ မီးထွန်းသည့်အချိန် ဂိုထောင်များ၊ ဂတ်စ်မီးတိုင်များဖြင့် အထူးတလည် ထင်ရှားလှပသည်။ ရှေးဟောင်းပုံစံ စားသောက်ဆိုင်များလည် ရှိပါသည်။
JR ( Otaru Station) မှ လမ်းလျှောက်ပါက ၈ မိနစ်
(ဟာ ? ဒီလိုနေရာမှာ တိုရိအိဂိတ်ပေါက်က ! ) ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ တိုရိအိဂိတ်ပေါက် ၆ ခု လက်ရွေးစင်
ဟာ ? ဒီလိုနေရာမှာ တိုရိအိဂိတ်ပေါက်က ……။ မြို့ကို လမ်းလျှောက်သွားရင်တောင် ရှာတွေ့ နိုင်တာက တိုရိအိဂိတ်ပေါက်ဖြစ်တယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ တိုရိအိဂိတ်ပေါက်ကို ၆ ခု လက်ရွေးစင်စုစည်းထား...